Fampisehoana horonan-tsary mifono ankolaka - Ellicott Dredges
Lahatsary Dredge Videos
Ellicott® cutterhead dredges azo alaina amin'ny habeny maro sy mihady lalina. Ny endrika ataon'izy ireo mavesatra dia miantoka ny androm-piainany vokatra bebe kokoa ary fiverenan'ny fampiasam-bola ambony.
Fiompiana biby fiompy mifono vy
Ny an'i Ellicott Miompy Dragon® ny dredges dia mety ho an'ny Marinas, lalan-drano tery sy tetik'asa fanarenana ny tany. Ny hivezivezeran-tsambo tohatrao dia tsotra entina hampandehanana, mahomby ary fiara iray azo entina.
Betsaka ny safidy fikirakirana fitaovana azo ampiasaina amin'ny fanariana fitaovana dredged. Ny safidy toy izany dia misy ny rafitra mekanika Dewatering Systems ho an'ny sediment, Dredge Material Places toerana misy fitaovana pumped, Open Discharge rafitra ho an'ny pumping fitaovana mivantana eny amoron-dranomasina, ary Dewatering Tube mba hitazonana ny solids.
Ny fantson-tsolika sy ny seranan-tsambo miaraka amin'ny Ellicott Dragon® Dredge
Ellicott Dragon® Dredges dia ilaina ao manadio fidirana sy seranan-tsambo. Ny fanangonana fasika dia afaka manakana tanteraka ny fantsona tsy hahazo fivezivezena. Ny Ellicott Dragon® Dredge dia azo ampiasaina hanadiovana ny fantsona miditra. Aorian'ny fitrandrahana ilay fantsona dia afaka mivezivezy soa aman-tsara ny sambo.
Tombontsoa amin'ny fandefasana hidradrika amin'ny fangatahana fitrandrahana
Ny fitrandrahana Hydraulika dia manana tombony betsaka amin'ny fitrandrahana mekanika. Ohatra, ny fitrandrahana hydraulic dia manolotra ny fahafahan'ny mpiasa mihena, ny angovo kely kokoa sy ny etona, ny vidin'ny renivohitra kely ary ny vidin'ny fikolokoloana ambany. Ary koa, ny dredging hydraulic dia mamela ny famindrana mivantana ny zavamaniry fanodinana, izay mampihena ny famerenana amin'ny laoniny ny fitaovana.
Biby mitondra kalesy
Ny fampidirana ny rafi-pitaterana spud dia mampitombo ny sakan'ny tsiranoka amin'ny dredge ary manatsara ny famokarana dredge amin'ny alàlan'ny famelana ny mpandraharaha handroso maromaro alohan'ny hamerenany ny spud miasa. Ny fiara fitaterana spud namboarina dia azo ampifandraisina amin'ny dredges anay.